वर्षमा १२ करोड ४० लाखको भन्सार छुट लिन्छ झापाको बिएन्डसी अस्पताल, झाडा पखाला लागेका बालकलाई गेटबाट फर्काइदियो — Ratopost.com News from Nepal
वर्षमा १२ करोड ४० लाखको भन्सार छुट लिन्छ झापाको बिएन्डसी अस्पताल, झाडा पखाला लागेका बालकलाई गेटबाट फर्काइदियो
झापाको अर्जुनधारा–११ का अजित भारतीका डेढ वर्षीय छोरा आश्विनलाई लामो समयदेखि ज्वरो आएको थियो । यो त्यतिवेलाको कुरा थियो, जतिवेला निजी अस्पतालले नाफाका लागि बिरामी तानातान गर्थे । लामो समय अस्पताल बसेपछि बालकको स्वास्थ्य सुधार भयो र उनलाई घर लगियो । तर, पछिल्लो समय बान्ता आउने र पखाला चल्ने भएपछि परिवारले बिर्तामोडस्थित बिर्तासिटी अस्पताल पुर्‍यायो । तर, डाक्टर नभएको भन्दै अस्पतालले फर्काइदियो । ‘त्यहाँबाट फर्किएपछि हामीले बी एन्ड सी लग्यौँ । त्यहाँ त झन् गेटबाटै खेदयाे । पखाला लागेको छ र बच्चा सिकिस्त छ भनेर हारगुहार गर्दा पनि अस्पताल प्रशासनले भर्ना गर्न मानेन । बिरामीका आफन्त कोषराज कटुवालले भने, ‘अहिले क्लिनिकबाट औषधी ल्याएर घरमै उपचार गरिरहेका छौँ । तर, संकटको वेला बालबालिकापट्टि सामान्य दया पनि नराख्ने अस्पताललाई सरकारले किन कारबाही गर्दैन ? हामीले जस्तै अरु कतिले दुःख पाए होलान् । सोचेर हामी चिन्तित छौँ ।’
देशमा कोरोनाको सन्त्रास बढेयता निजी अस्पतालले बिरामीलाई गेटबाटै फर्काउने गरेका छन् । छिमेकीको घरमा लड्दा कन्काई नगरपालिका–१ का चित्रबहादुर दर्जी (४०) अचेत भए । उनलाई पनि बिएन्डसी अस्पताल लगिएको थियो । तर, बिरामी अचेत छन् भनेर याचना गर्दा पनि अस्पतालले गेट खोल्न मानेन । उनका आफन्त गेटमै विलखबन्दमा थिए । कतिसम्म भने मेची अस्पतालले समेत उनीहरूको पीडा सुनेन ।
अधिकारीले तानसेनको युनाइटेड मिसन अस्पतालमा फोन गरे । तर, अस्पतालले ज्वरो आएको बिरामीलाई ल्याउँदै नल्याउन भन्यो । अधिकारीले भने, ‘मैले अस्पतालमा फोन लगाएँ, ज्वरोको बिरामी ल्याउन लागेको बताएँ । तर, यहाँ ल्याउँदै नल्याउनु, हामी हेर्न सक्दैनौँ भन्ने जवाफ दिए ।’
त्यसपछि एम्बुलेन्सको पछाडिको ढोका खोलेर टाढैबाट थर्मल गनले दामोदरको ज्वरो नापियो । नर्सले केही औषधि आमाको हातमा थमाइदिइन् र तत्काल फर्किन भनिन् । अस्पतालमा भोगेको अपमान सम्झिँदै सावित्राले भनिन्, ‘छोराले पिसाब लाग्यो भन्दा पनि झर्न दिएनन् । पछि चालकले जंगलतिर पुगेपछि एम्बुलेन्स रोकिदिए ।’
नयाँ पत्रिकाले बिरामीमाथि भएको अपहेलनाबारे जिज्ञाशा राख्दा मेडिकल कलेज निर्देशक डा. राजु शाक्यले अस्पतालभित्रै लगेर डाक्टरले बिरामी जाँचेको दाबी गरेका थिए । तर, नयाँ पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा समाचार छापिएपछि सिडिओ र जिल्लाका सांसदले अस्पतालको व्यवहारको आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि निर्देशक शाक्यले गल्ती स्विकारेका छन् । ‘मलाई गलत रिपोर्टिङ भएको रहेछ, गल्ती भयो म माफी माग्छु,’ उनले भने ।
जनकपुर–१६ कपिलेश्वरका २२ वर्षीय हकिकत अलि खान ज्वरो आएपछि धनुषा अस्पताल गए । तर, अस्पताल सञ्चालक डा. रामबाबु जैसवालले नै उपचार गर्न नसक्ने भन्दै फर्काइदिए । जैसवालले प्रादेशिक अस्पताल जान भनेपछि हकिकत खुरुखुरु त्यतै गए ।
आइतबारदेखि भने प्रादेशिक अस्पतालमा ज्वरोका बिरामीको उपचार हुन थालेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चिकित्सकको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई) उपलब्ध गराएपछि उपचार सुरु गरेको हो । नयाँपत्रिका